Shuruudaha iyo shuruudaha | WatercolorPNG
Liiskan dhameystiran waa heshiis dhexmaray adiga ("Waxaad"Iyo WatercolorPNG, matalaya Vadim Rozov, S. Kovalevskoy 49 / 64 Dnipro, 49000 Ukraine.
WatercolorPNG waxay ku siinaysaa xuquuqda aad u leedahay isticmaalka Qodobka (sida lagu qeexay hoos) sida ku cad shuruudaha Loo Dhaafay Buuxda. Isticmaalka alaabooyinka (oo ay ku jiraan waxyaalihii la bixiyay ee ku xayirnaa xoriyaadka joogtada ah iyo / ama xoriyada todobaadlaha ah) waxay ku xiran yihiin shuruudaha Lookan dhameystiran.
"Bundle" - Uruurin si taxadar leh loo xareeyay oo loo xilsaaray alaabta oo loo wada dhan yahay si loogu sahlo.
"Dhameysta alaabta" - Waxyaabaha farshaxanka ama wax soo saarka oo ay sameeyeen adiga oo isticmaalaya xirfad madax-bannaan iyo dadaal ay ku jirto Qodobka iyada oo la adeegsanayo waxyaabo kale oo naqshad ah oo aan Sheyga laga dhigi karin ama laga soo saarin Qalabka dhamaadka.
"Qeybta" - Sawirada, sawirrada, farsamooyinka feylka / jarista, astaamaha iyo / ama isku darka wax kasta oo naqshad noocaas ah oo laga soo qaadan karo boggeena.
Mashruuca "Project One" (1) wuxuu loola jeedaa qaadista sameynta alaabooyinka ugu dambaysa ee Naftaada (Shatiga Shakhsi ahaaneed) ama qayb sadexaad (Lacageed Ganacsi ama Lacageed Lacageed) oo ka hooseeya isla hal fikrad la mid ah oo la dhamaystirayo isla muddadaas. Tusaale ahaan waxaad ku xiran tahay macmiil si aad u abuurto 4 noocyada kala duwan ee Qalabka Dhameystiran (ie, t-shirt, koofiyad, mug, iyo buug) adoo isticmaalaya Sheyga iyo dhamaan Qalabka Ugu Dambeeya waxaa loo gudbin doonaa macmiilka isla maalintaas. Waxyaabaha Qalabka Ku Xigeenka ah waxaa lagu daabici karaa qadar ayadoo la raacayo Shatiga. Si kastaba ha noqotee, macaamil ka duwan (maahan macmiilka aan sheegnay) wuxuu kuugu soo dhawaadaa inaad abuurto isla Axada la mid ah adoo adeegsanaya shey isku mid ah, taas oo loo tixgelin doono mashruuc cusub oo u baahan shatiga cusub.
3. Noocyada shatiga:
Waxaanu bixinnaa noocyada liisamada ee 3: Shakhsiyadeed, Ganacsi Lacageed iyo Ganacsi Dheeraad ah. Hoos waxaa ku qoran isticmaalka loo ogol yahay:
Shahaadada - Qofka oo keliya;
Tirada Isticmaalaha (ama Kuraasta) - Isticmaal Keli ah (ama Kursi);
Isticmaalka Ganacsiga - Looma Ogolaan;
Isticmaalka Ganacsiga aan-Ganacsi lahayn (Shakhsi ahaan) - Loo ogol yahay;
Mashruucyo aan xadidnayn / daabacan ee Qalabka Ugu Dambeeya;
Shey kasta oo loo isticmaalo oo keliya isticmaalkaaga shakhsiyeed kaas oo (i) uusan keenin wax faa'iido lacageed ah laftiisaaga ama cid saddexaad; (ii) loolama jeedo in lagu iibiyo iibinta; iyo (iii) looma isticmaali karo goob, goob ama dhacdo taas oo la xiriirta ganacsi, bulsho ama ururo aan faa'iido doon ahayn.
Shahaadada - Shakhsi ama Sharci Sharci (Shirkad);
Tirada Dadka Isticmaalaya (ama Kuraasta) - Xaddidan hal shirkad;
Isticmaalka Ganacsiga ee Qalabka Dayacan iyo Dijital;
Xaddid ilaa iibka / nuqulada 5,000 Isugeynta Wadarta Dhismaha Jirka ah iyo Qalabka Dheeraadka ah;
Xayeeysiinta iyo Horumarinta - Xayeysiisyada Jireed (Baddelan) ee Xayeysiisyada ah ee Suuqa Deegaanka. Isticmaal koonto warbaahin bulshadeed ganacsi oo loo ogol yahay;
Content Content - 500,000 daawadayaal noolasha;
Markaad iibsato Bundle, shuruucda 5,000 ee shuruudaha daabacaadda waxay khuseysaa shakhsi kasta sheyga oo aan aheyn Bundle guud ahaan;
Isticmaalida website-ka, codsiga, ama ciyaarta ciyaaraha waa mamnuuc;
Waxyaabaha dib-u-helidda / ka-qaadashada ee Hantidhawrka Sharci ee ku jira qaabka faylka ama macluumaadka kale ee tartanka leh Hantidhawrka Ruqsad haysta waa mamnuuc.
Xaddid ilaa iibka / nuqulada 250,000 Isugeynta Wadarta Dhismaha Jirka ah iyo Qalabka Dheeraadka ah;
Xayeeysiinta iyo Horumarinta - Xayeysiinta aan xadidnayn ee Xayaysiinta. Isticmaal waraaqo warbaahineed oo badan oo ganacsi loo oggol yahay.
Content Content - Lama oggola tirada tirada daawadayaasha nolosha
Markaad iibsato Bundle, shuruucda 250,000 ee shuruudaha xaddidaadda daabacan waxay khuseysaa shakhsi kasta sheyga oo aan aheyn Bundle guud ahaan.
Isticmaal bogga, codsiga, ama ciyaarta ciyaaraha waa la ogol yahay.
3.1 Isticmaalka Ganacsiga
"Isticmaalka Ganacsiga" waa wax kasta oo la isticmaalo: (i) Taas oo ku lug leh is-dhaafsiga lacag ama tixgelin kale, (ii) oo kor u qaadaya ganacsi (tusaale ahaan, ganacsi, shirkad, ama shuraako), badeeco, ama adeeg, ama (iii) meesha faa'iidada dhaqaale ama tixgelin kale waa la raadsadaa ama natiijo, si toos ah ama si dadban, Isticmaalka Liisanka ee isticmaalka Hantidhawrka Lacageed. Haddii qof ama in ka badan oo ka mid ah shuruudaha (i), (ii), iyo (iii) la buuxiyo, ka dibna isticmaalaha waxaa loo arkaa "Ganacsi".
Abuurista qalabka derbiga ee loo isticmaalo hoolka xafladaha
Siinta sheyga bilaash ah ee alaabta dhamaadka ah macaamiisha mustaqbalka
Inaad lacag bixiso si aad u abuurto alaabooyinka ugu dambeyn ee dhacdooyinka samafalka
3.2 - Isticmaalka Ganacsiga Ganacsiga (Shakhsi)
"Isticmaalka Ganacsiga aan Ganacsiga ahayn" ayaa loo adeegsadaa ujeedooyin gaar ah; Isticmaal kasta oo buuxiya qeexitaanka "Isticmaalka Ganacsiga" ma noqon karo adeeg aan ganacsi ahayn.
Sameynta kaadhadhka martiqaadka arooska ee arooska ubadkaaga
Samaynta kharashka Halloween ee wiilkaaga
Kaarkaaga kirada ah ee loogu talagalay qoyskaaga iyo asxaabtaada
4. WAXYAABAHA LOO ISTICMAALAYO IYO WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAYO
"Dhamaadka Isticmaalka" ee Hantidhawrka La Oggol Yahay Waxa loola jeedaa Isticmaalka Hantidhowrka Ruqsadaha ah kaliya sida ugu fasirsan hoosta:
4.1 - Dhameysta alaabta
✓ Alaabooyinka Jirka: Qofka ogolaanshaha wuxuu abuuri karaa alaab dhamaystiran oo jirka ah sida, laakiin aan ku xaddidnayn, dharka, kaararka, casuumaadyada, dhejiyeyaasha, shuclada, shaabadaha, shumacyada, boostarada, calaamadaha, qurxinta guriga, iwm.
✓ Product Baako: Qofka ogolaanshaha wuxuu abuuri karaa alaabta baakad ahaan ama alaabeed ee loo isticmaalo iibinta ama iibsiga sida, laakiin aan ku xaddidnayn, sanduuqyada, warqadaha, stickers, ama weelasha iwm.
✓ Waxyaabaha Dijital ah: Licensee wuxuu abuuri karaa badeecooyin dhamaystiran oo loo adeegsado dib u iibsiga sida naqshadaha dhismaha, cinwaanada bogga, iwm.
✓ Daabacaadda Daabacaadda ama Daabacaadda: Sharciyeyntu waxay u adeegsan kartaa Hantidhowrka Ruqsadaha ah ee daabacaadda dhijitaalka ah ama daabacada sida wargeysyada, kaararka, marti-gelinta, albaabada sawirada, iyo buugaagta, buugaagta e-buugaagta ama daabacaadda.
✓ Xaddidnaanta Maqnaanshaha Ku Saabsan Qalabka Xogta Isticmaalka Ganacsiga: Eeg shuruucda liisankaaga (Shakhsiga / Ganacsiga / Lacagta Ganacsiga). La xiriir WatercolorPNG ruqsadda gaarka ah haddii shatigaaga u baahan yahay tiro ka badan isticmaalka ganacsiga.
4.2 - Warbaahinta Bulshada, Suuq-geynta, iyo Xayaysiinta
✓ Warbaahinta Bulshada Shakhsiga ah ee Isticmaalka Ganacsiga: Liisanka Shakhsi ahaaneed (sida, shakhsi), mid (1) warbaahin shakhsiyeed ama shakhsiyadeed oo xisaabtamaya isticmaalka aan ganacsiga ahayn.
✓ Warbaahinta Bulshada ee Adeegsiga Ganacsiga: Liisanka Ganacsiga Ganacsi Lacageed ama La Wareegay Haddi ay khuseyso (tusaale ahaan, ganacsiga), dhammaan Shirkadaha Liisanka ee haysta oo maamula xisaabaadka warbaahinta bulshada ayaa loo oggol yahay Isticmaalka Ganacsiga. Liisanka Ganacsi ee La Wareegay wax xadid ah kuma laha koontooyinka iyo bogagga ay leedahay oo ay maamusho Lacageedka isticmaalka Ganacsiga.
✓ Jireed (Baddalid) Xayeysiisyada Isticmaalka Ganacsiga: Ruqsadda Ganacsan ee La Wareegay Haddii ay khuseyso (tusaale ahaan, ganacsiga) xayeysiinta sida boodhadhka, calaamadaha, xayeysiis daabacan, iwm. isticmaalka ganacsiga ee suuqyada gudaha, suuqyada qaranka, iyo suuqyada caalamiga ah. Suuqa "Local" macnaheedu waa in dhammaan bandhigyada ama qaybinta xayeysiinta la ogol yahay waa inay ku dhex jiraan 200-mile radius gudaha xudduudaha waddan / wadan. Suuqa "Qaranka" macnaheedu waa qeybinta ama muujinta xayaysiinta ka baxsan 200-mile radius gudaheeda hal waddan / wadan. Suuqa "Global" macnaheedu waa qayb kasta oo muujinaya xayaysiinta in ka badan hal wadan / waddan.
✓ Xayeysiisyada Dijital ah ee Isticmaalka Ganacsiga: Liisanka Ganacsi ee La Wareegay Haddii ay khuseyso (tusaale ahaan, ganacsiga) xayaysiisyada internetka sida xayeeysiinta adeegga Google Ads, Moodooyinka Ads, Facebook Ads, Linkedin Ad, iwm.
4.3 - Wargeyska iyo Iskuxirka Muuqaalka Sawirka iyo Maqalka Maqalka
✓ Wargeyska iyo Akhriska: Wargelinta iyo ka gudbinta shabakada, cable, internetka, satellite-ka, aragtida riwaayadaha, video-ka dalbashada ama soo-rogista sawir-gacmeedka iyo sawir-qaadashada, oo ay ku jiraan xayeysiinta
✓ Xaddidnaanta Maqalka ee Warbaahinta iyo Akhrinta: Xaddidaadyada ku salaysan nooca liisankaaga.
4.4 - Horumarinta Digital
✓ Horumarinta Software Website, Horumarka Kumbuyuutarka Mobile, Horumarinta Codsiga Macaamilka, iyo Horumarinta Ciyaaraha Gawaarida Isticmaalka Ganacsiga ama Isticmaalka Ganacsiga: Licee waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo Hantidhawrka Sharci ee hal (1) magac loogu talagalay isticmaalka Ganacsiga ama Isticmaalka Ganacsiga. Xaddidnaanta tirada ee Horumarinta Dijital: Hantida liisanka liisan leh waxaa loo isticmaali karaa hal website, codsi, cayaar fiidiyoo (website kasta oo dheeraad ah, codsi, ama ciyaarta video) oo ay ku jiraan (aan xadidnayn alaabta la wareegayo), waxay u baahan tahay rukhsad gaar ah) xaddidaadda 4.1 (Qalabka Ugu Dambeeya). Tusaale ahaan, Liisanka wuxuu isticmaali karaa Hantidhowrka Lacageed ee 1 macaamiisha moobiillada macaamiisha kaas oo laga yaabo in lagu soo wareejiyo ama lagu iibiyo 250,000 (2) wadarta guud (sida ku xaddidnaanta xaddiga 4.1), laakiin Liisanka ma isticmaali karo hantida ruqsadda leh ee 1 mobile magaca barnaamijka iyo cinwaanka website-ka 1 ee kasta oo iibiya saacadaha 250,000 (2) (tani waa shati gaar ah oo lagu iibsado moobilka moobiillada iyo website-ka). Xaddidnadan xadidan waxay ku jirtaa hal iibsasho, sidaas darteed Licensee wuxuu u iibsan karaa laba ruqsadood oo loo yaqaan "Asseted Asset" si loo kordhiyo tirada loo oggol yahay (oo ku xiran shuruudaha shatiga kasta ee ku habboon). (2) Xaddidnaanta Tirada ku saleysan nooca liisankaaga.
5. ISTICMAALKA HORUMARKA (adeegsigaan waxaa laga yaabaa inuu heli karo liisan shaqsiyeed, la xiriir WatercolorPNG si aad u ogaato wax dheeraad ah):
5.1 - Dhameysta alaabta
✗ Arjiyada Codsiyada Iskoolka ah (sida Adeegyada Daabacaadda iyo Isticmaalka Bixinta). Isticmaal kasta oo u ogolaanaya qof kasta oo aan ahayn Liisanka, sida isticmaalaha ugu dambeyn, si loo dhejiyo alaabta elektarooniga ah ama alaabeed dhamaystiran waa la mamnuucay, ha ahaato isticmaalka Ganacsiga ama adeegsiga aan ganacsiga ahayn. Tani waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidneyn, "daabacida dalbashada", "loo sameeyay amar" ama "download download dalbashada".
5.2 - Horumarinta Digital
✗ Isticmaal sida Web-faylka ama Waraaqaha Ku-meel-gaadhka ah: Lagama yaabo inaad hirgalisid Hantida liisanka oo ah warqad, oo ay ku jirto iyada oo aan xadidnayn bogga internetka, e-buugga, ama e-daabacaadda isticmaalka Ganacsiga ama isticmaalka aan ganacsiga ahayn.
5.3 - Ganacsiga iyo Xuquuqda daabacaadda
✗ Trademark: Hantidhawrka ruqsad haysta looma adeegsan karo qayb ka mid ah astaanta calaamadaha, calaamadda adeegga, calaamadda naqshada, magaca ganacsiga, ama isticmaalka la midka ah (1) hantida ruqsad haysta si aad ah loo beddelo iyo (2) maaha qaybta ugu sareysa Isticmaalka Dhamaadka. Munaasabaddan ma dhacdo Heshiiskan Dukumiintiga wuxuu u ogolaanayaa Liisanka - iyo Shatiiluhu ma raadin doono - diiwaangelin, ilaalin, ama fulin karo xuquuqda ganacsiga ama xuquuqda la midka ah ee Hantidhawrka Shatiga laftiisa kaas oo ah in lagu diido diiwaangelin kasta. La xiriir WatercolorPNG si aad u heshid liis gaar ah haddii xuquuqdan la rabo.
✗ Xuquuqdaada: Sharciga looma oggola inuu codsado Hantidhawrka Ruqsadaha haysta (ama isbeddelka) oo ah shaqadiisa u gaarka ah ee xuquuqda lahaanshaha (hanti loo siiyay ruqsad asal ah).
5.4 - Teknoolojiyada mustaqbalka
✗ Liisanka wuxuu ku xaddidan yahay isticmaalka si cad loo oggol yahay ee lagu sheegay Heshiiskaan Shatiga: Tiknoolajiyadda mustaqbalka ee jira iyo isticmaalka si cad ayaa loo xajiyaa oo aan lagu darin baaxadda liisanka.
6. ISTICMAALKA HORUMARKA DIBADDA. Wax kasta oo ku jira heshiiskaan shatiga ah wuxuu bixiyaa Liisanka mid ka mid ah xuquuqahan soo socda, dhammaan xuquuqda si cad loo hayo:
6.1 - ✗ Iibinta ama liisanka laysanka ruqsad haysta ama wax kasta oo isbeddel ah ee ku jira foomka feylka ee la adeegsanayo waa mamnuuc.
6.2 - ✗ Hantida ama Liisin Kale ee Ruqsadaha Laysan ama wax kasta oo isbeddel ah ee habka si toos ah ugu tartamaya Hantidhawrka Aasaasiga ah ee Ganacsi ahaaneed ayaa si adag loo mamnuucay (tusaale ahaan, hantida stock ama template).
6.3 - ✗ Samaynta dadweynaha ama la wadaagida Hantida liisan leh si kasta oo ay u oggolaato dadka kale inay soo dejiyaan, soo saaraan, ama dib u furtaan Aqoonsiga Ruqsad haysta sida faylka loo yaqaan "standalone file" (micnaheedu yahay kaliya faylka laftiisa, oo ka duwan isticmaalka dhamaadka mashruuca si cad loo ogolyahay) waa mamnuuc.
6.4 - ✗ Isticmaal Hantida liisan leh ee sawir-gacmeedka, khayaano, fara-xumeyn, sharcidarro, sharci-darro, wax-ka-baddasho, waxyeelo, ama waxyaabo cayilan, ayaa si adag loo mamnuucay, oo ay ka mid tahay, aan xadidnayn, isticmaalka Hantidhawrka Lacageed ee:
(i) waxay abuuri kartaa halis ah waxyeello, lumis, dhaawac jidheed ama maskaxeed, qulub maskaxeed, dhimasho, naafonimo, kala-soocid, ama jirro jireed ama maskaxda adiga, qof kasta oo kale, ama xayawaan kasta;
(ii) waxay abuuri kartaa halis kasta oo ah khasaaro ama waxyeelo kale qof ama hanti;
(iii) waxay raadineysaa in ay waxyeelo u geystaan ​​ama ka faa'iideystaan ​​carruurta iyaga oo u soo bandhigaya waxyaabaha aan habooneyn, waydiisanayaan faahfaahin shakhsi ahaan loo aqoonsan karo ama haddii kale;
(iv) wuxuu noqon karaa ama ku biiri karaa dembi ama jirro;
(v) waxa ku jira macluumaad kasta ama nuxur ahaan aynu u aragno in aanu ahayn sharci-darro, waxyeelo, xadgudub ah, midab-takoor ama jinsi ahaan xadgudub ah, xadgudub ah, xadgudubyo, ku-xadgudub xuquuqda shakhsi ahaaneed ama xuquuqda daabacaadda, dhibaataynta, kufilidda dadka kale (sida dadweynaha ama si kale), xishood, hanjabaad, nacayb, ama caqligal kale;
(vi) waxaa ku jira macluumaad kasta ama maaddo sharci darro ah (oo ay ku jiraan, aan xadidnayn, bixinta macluumaadka gudaha ah ee hoos yimaada sharciyada ajaanibta ama qolyaha ganacsiga ee kale);
(vii) waxaa ku jira wax macluumaad ama content ah oo aanad xaq u lahayn in aad diyaar u ahaato sharci kasta ama xiriiro qandaraas ama heshiis ku salaysan;
(viii) waxa ku jira macluumaad kasta ama maaddo aad ogtahay inaysan sax ahayn oo hadda; ama
(ix) wuxuu kor u qaadaa midabtakoorka, xishoodka, nacaybka ama waxyeello jireed nooc kasta oo ka dhan ah koox ama shakhsi kasta.
6.5 - ✗ Si been ah u matalaya qoraaga iyo / ama lahaanshaha hantida ruqsad haysta si adag ayaa loo mamnuucay.
6.6 - ✗ Isticmaal kasta oo kale oo aan si cad loo ogalaan Qeybta 4 (Isticmaalka Isticmaalida Lahaanshaha iyo Tirada / Xadidnaanta sawirka) si adag ayaa loo mamnuucay.
7. WAXYAABAHA LAGA HELAYO QAYBTA KALA DUWAN YAHAY (Isticmaalka qaybta saddexaad wuxuu u baahan yahay dhinac saddexaad si uu u helo liisankiisa gaarka ah)
7.1 - Isticmaalka Isticmaalka Saddexaad wuxuu Shardi ka dhigayaa Luqad Keli
Heshiiskaan Shatiga ahi ma oggolyahay farshaxanka marka laga reebo xuquuqda xaddidan ee wax ka bixinta hoos ku xusan Qeybta 7.2.
7.2 - Loo Saarayo Fasax Lagu Hayo.
Liisanka waxaa laga yaabaa in uu siideynayo Xuquuqda ogolaanshaha Licensee ee dhinacyada saddexaad oo keliya saddex xaaladood:
(a) sameynta, suuq-geynta, ama qaybinta dhamaystirka Isticmaalka Dhamaadka Dhamaadka (kor lagu qeexay) ee isticmaalaya Hantidhawrka Ruqsadaha haysta (sida cad loo ogol yahay) marka la fulinayo mulkiilaha, iyada oo la tixgelinayo in macaamiishiisa la siin karo oo keliya shardiga mamnuucidda ka soo jiidashada, dib u daabicida ama isticmaalka Hantidhawrka Ruqsadaha ah hab kasta oo kale iyo Shatiiluhu waa inuu mar walba hubiyaa in la raaco shuruudaha Heshiiskan Heshiiska Lacageedka ah ee loo yaqaan 'sublicensee' iyo in la sii daboolo wax kasta oo aan u hoggaansanaan. Tusaale ahaan, Liisanka wuxuu isticmaali karaa qaybiyeyaasha si loo soo saaro ama loo qeybiyo alaabta jirka si loogu iibiyo ama baako alaabta; Sidoo kale, Licensee wuxuu isticmaali karaa bixiyeyaasha saddexaad, sida martigelinta bixiyeyaasha si ay u martigeliyaan bogga internetka ama soo-saaraha shabakada si ay u muujiyaan xayeysiisyada la dhamaystiray;
(b) Adeeg bixiyaha oo u adeega shardi ahaanshaha liisan bixiyaha si uu u siiyo adeega shatiyeyn bixiyaha ah (i) Shahaado bixiyuhu mar kasta waa inuu hubiyaa ku dhaqanka shuruudaha Heshiiskan Heshiiska Lacageedka ah ee ka soo haraayo Shahaadada Lacageed iyo in la sii daboolo wax kasta oo aan u hoggaansamin (iyo ii ) Liisanka ayaa iibsaday tiro ku filan oo kuraas ah oo loo yaqaan 'Licensed Asset Licensee' (Tusaale ahaan, qof waliba wuxuu u baahan yahay liisanka sida korka lagu sheegay); iyo
(c) macaamiisha Shahaadada Lacageed ee Shatiyuhu ku wareejinayo macmiilka dhammeystiran Isticmaalka Dhamaystirka (sida kor lagu qeexay, sida bogga internetka oo dhammaystiran, xayaysiinta, badeecada, ama baako alaabta). Tusaale ahaan, waxaa loo ogolaan karaa oo kaliya in shuruudda la geliyo ka-saarista, dib-u-soo-saarka ama isticmaalka Hantidhowrka Sharciga ah si kasta oo aan ahayn lagama maarmaan si loo isticmaalo Dhamaystirka Isticmaalka Shatiga siinta macmiilka. Shirkadda ogolaanshaha waa inay mar walba hubisaa in la raaco shuruudaha Heshiiskan Heshiiska Loo Gaynayo Shahaadada Lacageedna lagama maarmaanka u ah wax kasta oo aan u hogaansamin.
8.1 - Marka loo baahdo credit: Dhammaan isticmaalka tifaftirka waxay u baahan tahay credit; si kastaba ha ahaatee darajada isticmaalka aan tifaftirneyn kaliya ayaa looga baahan yahay oo keliya marka shuruudaha la siinayo bixiyeyaasha kale ee shatiyada shatiga leh. Shahaadooyinka, marka loo baahdo, waa inay noqdaan kuwo la aqbali karo oo ku dhowaanshaha hantida ruqsad haysta iyo, hadba meesha ay khuseyso, si aad ah isku midka ah meeleynta iyo kobcinta dhibcaha kale
8.2 - Sida loo bixiyo credit: "[Magaca ruqsadda liisan ee hantida hantida] WatercolorPNG.com"
9. WAXYAALAHA WAXYAABAHA KA HELI KARAA SHARCIYADA GUUD
9.1 - Hantida Aqoonta
Dhammaan waxyaabaha la taaban karo ee la heli karo oo ku yaalla watercolorpng.com, oo ay ku jiraan, aan xadidnayn, Hanti-La-haystaha, waxaa ilaaliya xuquuqda Mareykanka iyo xuquuqda caalamiga ah iyo sharciyo iyo heshiisyo kale. WaterColorPNG, waxay udub dhexaad u tahay hantida liisan leh, laakiin waxay bixisaa shatiga xaddidan, aan ahayn kuwa aan la kala wareejin karin, iyo kuwa aan sharciyeysnayn (marka laga reebo sida loo fasiray kor), xuquuqda isticmaalka ruqsadda liisan leh si cad loogu sheegayo shuruudaha kor ku xusan. Dhammaan xuquuqaha kale, sida udhaxeeya Licensee iyo WatercolorPNG waxaa haya WatercolorPNG. Sharciga looma oggola inuu sheego mulkiilaha ruqsad haysta laftiisa ama xaq u lahaanshaha dakhliga ka soo jeeda bulshada ururinta marka la eego koobi, nuqul dijitaal ah ama isticmaalka kale ee sare ee Hantidhawrka Laysan. Wax kasta oo tixraac ah "iibsashada" ama "iibka" (ama shuruudaha la midka ah) ee Hantidhawrka Laheynayaa waxaa loola jeedaa iibsashada liisan xadidan oo keliya oo aan ahayn iibsashada xuquuqda aasaasiga ah ama shaqeyneysa. Aqoonsi, Milkiilaha Liisanka ee warbaahinta iyo / ama qalab kaas oo Lacageed Lacageed la diiwaangeliyey, haddii ay jiraan, ay ka duwan yihiin oo aysan siinaynin xaq u lahaansho xuquuq, magac ama xiiso iyo habka loo yaqaan 'Asseted Asset' lafteeda. Heshiiskaan Shatiga ahi ma siinayo Liisanka xuquuqda uu u leeyahay ganacsiga ama xuquuqda kale ee xuquuqda macaamiisha (ka reeban copyright) ee hantida liisan leh.
9.2 - joojin
WatercolorPNG waxay joojin kartaa Heshiiska liiskan waqti kasta haddii shatiga uu jebiyo mid ka mid ah shuruudaha arrintan ama heshiis kasta oo la leh WatercolorPNG, oo kiiskana waa inuu si deg deg ah u joojiyaa: joojiyaa isticmaalka Hantida Shatiga; tirtiro ama burburiyaan nuqullo kasta; iyo, haddii la codsado, u xaqiijso WatercolorPNG qoraal ahaan in Shirkadda ogolaanshaha ay u hogaansamayso shuruudahaan. Haddii Liisigani isticmaalo Hantidhowrka Sharciga ah ee warbaahinta bulshada ama qaybta kale ee sadexaad ee xisbiga iyo bogga ama website-ka (ama ku dhawaaqaya in uu qorsheynayo isticmaalka) Asseted Asset ujeedadiisa ujeeddo ama hab aan lid ku aheyn Heshiiskan Shatiga, xuquuqda loo isticmaalo isticmaalka noocan oo kale ah waa in isla markiiba soo afjaraan, iyo marka ay dhacdo, codsiga WatercolorPNG, Shirkadda ogolaanshuhu waxay ogolaatay in ay ka soo saarto wax kasta oo ka mida mareegaha ama boggaan.
9.3 - Macluumaadka Ka bixitaanka
WatercolorPNG waxay joojin kartaa shatiga raasumaalka ruqsad haysta wakhti kasta iyada oo kali ah. Marka ogeysiiska WatercolorPNG, ama aqoonta liisanka loo yaqaan 'Licensee', in hantida ruqsad haysta laga yaabo in ay u hoggaansamayso jebinta xuquuqda saddexaad, WatercolorPNG waxay ubaahan kartaa shatiga si dhakhso ah, iyo kharashka gaarka ah ee liisan bixiyaha: joojiso isticmaalka hantida ruqsadda leh, tirtirto ama burburiso nuqullo kasta; iyo hubi in macaamiisha, shirkadaha iyo / ama liisamada ay sidoo kale sameeyaan. WatercolorPNG ayaa ku siin doonta bedelaadaha (oo ay go'aamiso WatercolorPNG ee xukunkeeda ganacsi macquul ah) oo bilaash ah, iyada oo ah waajibkeeda keli ah, iyada oo ku xiran shuruudaha kale ee Heshiiskan Liiskan.
9.4 - Baaritaan
Marka ogeysiis macquul ah, ogolaanshuhu wuxuu ku raacsan yahay in uu keeno nuqullada mashruuca WatercolorPNG nuqullo mashaariic ama dhamaystiran isticmaalka kuwaas oo ay ku jiraan Aqoonsi Lacageed, oo ay ka mid tahay bixinta WatercolorPNG iyada oo aan lacag la'aan ah helitaanka shabakadda internetka ama goobaha kale ee xaddidan ama goobaha kale ee xayiraad lagu hayo. Marka lagu daro, ogeysiis macquul ah, WatercolorPNG, waxay go'aan ka gaari kartaa, shaqaalaheeda ama dhinac sadexaad, hanti-dhowrka Hantidhowrka ee si toos ah ula xidhiidha Heshiiskan Shatiga iyo Isticmaalka Liisanka isticmaalka Hantidhowrka Laheyn si loo xaqiijiyo u hoggaansamida lacag bixinta iyo shuruudaha kale ee Heshiiskan Liiskan. Haddii xisaabin kasta ay soo bandhigto wax-qabadka hoos-u-qaadaha ee loo yaqaan WatercolorPNG ee shan boqolkiiba (5%) ama in ka badan oo ka mid ah mulkiiluhu waa inuu bixiyay, marka lagu daro bixinta WatercolorPNG qadarka lacag-bixinta iyo wax-qabadyada kale ee WatercolorPNG xaq u leedahay, waxay ku heshiinayaan in ay soo celiyaan WatercolorPNG kharashka sameynta baaritaanka.
Waa inaadan wadaagin, qaybin, beddelin ama iibin waxyaabaha dhinac saddexaad. Qaybaha seddexaad / macaamiishu waa inay iibsadaan Liisanka Dhameystiran haddii ay rabaan inay wax ka beddelaan Qodobbada Dhamaadka ah Waxaad khiyaaneysaa iyaga. Waxaad macaamiishaada siineysaa oo keliya waxyaabaha la isku daray.
Marka laga reebo xarfaha, Laguuma oggola inaad isticmaasho Sheyga "sida" waa sida ku salaysan isticmaalka ganacsiga (sida isticmaalka Sheyga iyada oo aan la isticmaalin xirfad madaxbannaan iyo dadaal si loo abuuro Qalabka dhamaadka looma ogola) waxaa loola dhaqmi doonaa sidii dib u soo noqoshada alaabtayada. Fikradaha waxaa loo oggol yahay in loo isticmaalo "sida" waafaqsan isticmaalka ganacsiga, si kastaba ha ahaatee, xarfaha waa in la dhejiyaa mana ku jiraan feylasha rasmiga ah ee OTF / TTF ee isticmaalka ganacsiga.
Marka laga reebo xirmooyinka la abuuro logo ee loogu talagalay inay ku caawiyaan adiga farsamada qoraallada, Maaha inaad isticmaashid waxyaabaha loo yaqaan ama lagu daro calaamad, aqoonsi shirkad, calaamad ganacsi ama calaamad calaamad. Looma ogola inaad iska diiwaangelisid alaabta Dhamaadka ah adoo adeegsanaya markasta, xitaa haddii Sheyada Dhamaadka ah la abuuray iyada oo la adeegsanayo xirmooyinka asaasiga ah.
Marka laga reebo Isticmaalka Shakhsiga ah, waxaanu kaa filanaynaa inaad sameysid Qalabkii Ugu Dambeeyey ee Sheyga aan loo baahneyn in dib loo sameeyo iyada oo kaliya lagu sameynayo isbeddel yar / wax yar oo aan la shaacin. Waa in aad sameysid shaqo cusub oo deris ah kaas oo ah mid laga soocayo Qeybta asalka ah. Fadlan maskaxda ku hay in ay jiraan kooxo kale oo saddexaad kuwaas oo isticmaali doona shay la mid ah oo sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in Your Products Ends ay yihiin sida ugu suurtogalka ah si looga fogaado tartanka ama lagu eedeeyo in la soocayo.
Waa inaadan u oggolaan in alaabta la soo saaro, la soo galiyo ama soo dejiyo qof kale oo aan aheyn naftaada.
11. Adigu Wakiil iyo Waalid:
Waxaad tahay ugu yaraan 18 sano jir ama aad xaq u leedahay inaad gasho Liisanka Buuxa;
Uma isticmaali doonno Walxaha si kasta ha ahaadee mamnuucan Shatigan Wadajirka ah;
Macluumaadka aad na siisay waa sax oo run ah, oo ay ku jirto iyada oo aan xaddidnayn dhammaan lacag bixinta iyo macluumaadka biilasha; iyo
Marka laga reebo sida lagu sheegay Liiskan dhameystiran, koonto kasta oo la furay ama lagu dayactirey adiga oo ku jira boggayaga ayaa la heli doonaa oo keliya adigoo isticmaalaya ujeedooyinka iyo shuruudaha lagu qeexay Liiskan buuxa.
Waxaad ogolaatay inaad si buuxda u difaacdo, magdhowto oo aad naga haysato, iyo masuuliyadayada, agaasimayaasha, shaqaalaha, milkiilayaasha, wakiillada, wakiillada, shatiyeyaasha iyo cid kasta oo nala xiriirta annaga iyo mid kasta oo ka mid ah hoogaamiyeyaasha, (liiska) liisan, Dhammaan sheegashada (oo ay ku jirto, aan xadidnayn, sheegashada dhinac saddexaad), deymaha, kharashyada, khasaarooyinka, magdhawga, ama kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka iyo kharashyada macquulka ah, ee ka soo baxa isticmaalka alaabooyinka ama wax kasta oo jebin ama ku xadgudbay , damaanad qaad ama ballanqaad / waajibaad kale oo adiga kugu sameeyay Liiskan buuxa.
Lagu siiyey inaadan jebin shuruudaha Shatiga Dhamaystiran, waxaanu kuugu oogi doonnaa masuuliyad ka saraysa Boqortooyada Mareykanka ee Boqolkiiba (US $ 100) ama lacagta guud ee adiga kugu siisay wixii khasaare ah oo toos ah Isticmaalka alaabtayada oo keena wax kasta oo dhab ah ama khatar ku ah dacwadda dhinac saddexaad, sheegasho ama muran ka dhan ah adiga. Magdhowgeennu wuxuu ku jiraa xaalad aad nagu siiso:
Ugu danbeyn shan maalmood (5) ogeysiis qoraal ah laga bilaabo taariikhda aad ogtahay ama si macquul ah u ogaato sheegashada ama hanjabaadda codsiga, haddii wargelintaas ay tahay inay ku jirto dhammaan faahfaahinta sheegashada markaa loo yaqaano adiga oo laguu direy hello@watercolorpng.com , Digniin: Talada Guud; Macluumaad buuxa, caawimaad, iyo iskaashiga difaaca ama dejinta; iyo
Xulashadeena, keliya koontoroolka difaaca, dejinta ama ficil kasta oo la xiriira.
Masuul kama noqon doonno wax dalab ah oo aan la ogolaanin iyada oo aan ogolaanshahayaga ama kharashyada sharci iyo / ama kharashyada kale ee la soo gudbiyey ka hor inta aan helin ogeysiiska buuxa ee sheegashada sida halkan ku qoran.
Alaabooyinka iyo boggayaga waxaa la siiyaa "sida, sida la heli karo, oo leh dhammaan khaladka" iyo, marka laga reebo sida lagu caddeeyey Liisanka Buuxa, ma sameyno wax matalaad ah ama shuruudo, muujin ama qeexan, oo ay ku jiraan wixii shuruudo ah ama uqalmaasho ujeeddo gaar ah. Waxaad ku raacsan tahay in anaga iyo aagaggayaga shaqsiyadeed, ama mid ka mid ah saraakiisheena, agaasimayaasha, shaqaalaha, milkiilayaasha, wakiillada, wakiillada, ruqsad bixiyeyaasha, iyo shatiyadaha (kuwa aan ka aheyn) waxay mas'uul ka yihiin waxyaallaha guud, ciqaabta, khasaare gaarsiisan ama khasaaro leh ama khasaaro faa'iido ama waxyeelo kale, kharashaad ama khasaare ka imanaya isticmaalka ama aan la isticmaalin alaabta, xitaa haddii dhinacyadan lagu taliyay, ama lagula taliyay suurtagalnimada dhaawacyada noocan ah.
14. Sharciga Xeerka iyo Sharciga
Fasiraadda iyo fulinta Shahaadadan dhamaystiran waxaa lagu maamulayaa shuruucda Ukraine ee ku xiran xukunkeeda iyo iyada oo aan loo eegin khilaafka mabaadi'da sharciyada. Maxkamadaha Ukraine ayaa yeelan doona awood gaar ah muran kasta oo ka soo baxaya waxqabadka Sharcigan dhamaystiran.
Looma wareejin doono xuquuqdaada ama danahaaga hoos yimaada shatigaan dhamaystiran ee dhinac kasta oo saddexaad iyadoon ogolaansho qoraal ah oo hore ah.
16 Xuquuqda Saddexaad ee Xisbiga
Qof kasta oo aan qayb ka ahayn Liiskan Dhammaystiran (haddii uu qofku magacaabo ama loo aqoonsado, ama loo aqoonsado, ama uu sameeyo qayb ka mid ah fasalka dadka sidaas magacaabay, loo yaqaan ama lagu aqoonsaday, Shahaadadan dhamaystiran) ma laha wax xaq ah oo ku saabsan fulinta shatigaas dhamaystiran ama mid ka mid ah ereyadiisa.
17. Heshiiska Dhammaan
Haddii shuruud kasta oo ka mid ah shatigaas dhamaystiran lagu hirgeliyo inuu noqdo mid aan waxba tarayn ama aan sax ahayn, xaqiiqadu ma saameyn doonto wixii kale ee bixinta, iyo inta ka harsan Liiskan Buuxa ee Dhamaystiran wuxuu noqon doonaa mid si wax ku ool ah u saameynaya ujeedooyinka dhinacyada. Ka gaabinta dhinac kasta si loo meelmariyo wixii shuruud ah ee Shahaadadan dhamaystiran looma xisaabin doono ka-dhaafitaanka fulinta mustaqbalka ee ama wixii kale ee kale. Waxaad ku heshiisay oo aad dib u xaqiijisay heshiiskaaga Liiskan iyada oo la soo dajinayo alaabta ama Bundles.
18. Heshiiska Elektrograamka.
Waxaad ku heshiisay oo aad dib u xaqiijisay Heshiiskaaga Liiskan Dhammaystiran si elektaroonik ah adigoo soo dejinaya Sheyga (yaasha).
19. Nidaamka Kajoojinta
Waa inaad soo gudbisid codsigaaga dib u soo celinta maalmaha 30 ka dib marka alaab la iibsado. Lacag soo celin ayaa la dalban karaa haddii:
Ma heleysid xiriiriyaha alaabta
Waxaad heshaa alaabta qaldan
Waxyaabaha khaldan ee gudaha
Sheegashadu waxay u arkeen qalad in qaybteena lagu daboolo kharashkeena oo leh 100% lacagaha dib loo celiyo.
Su'aalo dheeraad ah ma heysaa? Iska hubi noo FAQ ama aad la xiriirto kooxda taageerada saaxiibtinimo halkan.